BINANCE: Ahoana ny fametrahana ny Binance Desktop App amin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Androany no horesahintsika Fanapahana DeFi Averina indray, fa tsy amin'ny Wallet, na amin'ny Digital Mining Software (Miners), na amin'ny Messaging DApps. Androany dia hianarantsika ny fomba fametrahana manokana Fampiharana Desktop amin'ny cross-platform izay karazana User Interface an'ny a Fifanakalozana an-tserasera (tranonkala) fanta-daza, antsoina "Binance".
Marihina fa, ao amin'ny Fanapahana DeFi, Binance amin'izao fotoana izao dia heverina ho iray amin'ireo lehibe Fifanakalozana Cryptocurrency an'izao tontolo izao. Plus, "Binance" manarona iray manontolo DeFi Ecosystem tena lehibe, mitombo ary ekena eran'izao tontolo izao.
1 Fifanakalozana Cryptocurrency
2 BINANCE: fifanakalozana cryptocurrency tena tsara
2.1 Inona no atao hoe Binance?
2.2 Inona ny Binance Desktop App?
2.3 Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
2.3.1 marary mitsika
2.3.4 Sarin'ny sary
Ho an'ireo izay mety tsy mahalala betsaka momba ny Fifanakalozana Cryptocurrency, hanonona sombintsombiny tamin'ny lahatsoratray teo aloha izahay Fananana Crypto sy Cryptocurrency: Inona no tokony ho fantatsika alohan'ny hampiasana azy ireo?
Ka, somary nazava kokoa tamiko ny momba ilay Fifanakalozana Cryptocurrency, ary mba amin'ny faran'ity famoahana ity, ireo liana dia afaka mizaha azy io ary mampitombo ny fahalalany amin'ireo teboka mifandraika amin'ilay lohahevitra:
"Fanakalozam-bola (Exchange) an'ny Cryptocurrencies dia manondro ireo tranokala izay anaovana hetsika fividianana sy fivarotana cryptocurrency. Ireo dia mazàna koa mamela ny fiasana amina karazana fananana hafa toy ny fizarana na fiarovana ara-bola eken'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina mandrafitra azy. Ny tanjona kendrena a Fifanakalozana nentim-paharazana na fitsinjaram-pahefana (DEX), dia ny mamela ny mpampiasa (mpivarotra) Afaka mandray anjara amin'ny tsena crypto tantanana izy ireo mba hahazoana tombony arakaraka ny fiovaovan'ny vidiny (sanda maimaimpoana) izay mitranga ao."
"Ho fanampin'izay, mazàna ny ankamaroany sehatra voafehy tsara, izay mifanaraka amin'ny fenitry ny KYC (Fantaro ny mpanjifanao) y AML (Anti-famotsiam-bola). Ary matetika izy ireo vola ho an'ny serivisin'izy ireo ary hametraka azo antoka fetra renivohitra handray anjara amin'ny sehatra misy azy. Ary farany, ny Fifanakalozam-bola voafidy (DEX) Tsy toy ny Fifanakalozana nentim-paharazanaMiasa amin'ny fomba mitovy amin'izany izy ireo, na izany aza, ny voalohany dia afaka miasa amin'ny fomba itsinjaram-pahefana. izany hoe ao amin'izy ireo tsy misy mpanelanelana ary mizaka tena ny sehatra noho ny fandaharany. Noho io antony io dia matetika no miteny izy ireo avo lenta ny tsiambaratelo ary tsy fantatra anarana aza."
BINANCE: fifanakalozana cryptocurrency tena tsara
Satria, efa mazava izany, fa a Fanakalozam-bola Cryptocurrency, azo lazaina manokana momba izany «Binance» ny manaraka:
Izy io dia heverina ho iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ho azy haben'ny tsena, ary ny fitokisana lehibe apetrak'ireo mpampiasa an-tapitrisany manerantany. Ambonin'ny zavatra rehetra, satria manolotra a traikefa ara-barotra malalaka azo antoka, haingana ary manahirana, ampiasain'ny Cryptocurrency azy manokana antsoina hoe BNB.
Inona ny Binance Desktop App?
La Binance Desktop Application amin'ny ankapobeny dia karazany izy io User Interface (UI) mifototra amin'ny desk izay manahaka ireo fiasa tena manan-danja indrindra amin'ny tranonkala iray ihany.
Alohan'ny hanombohana amin'ity teboka ity dia tokony homarihina fa, ho an'ity hetsika fametrahana ity dia hampiasa a Respin (Snapshot mivantana sy azo ampidirina) anarana voatondro Fahagagana GNU / Linux izay miorina amin'ny MX Linux.
Izay, efa nohamarinina Fitrandrahana nomerika amin'ny fananana Crypto, manaraka ny tolo-kevitra marobe, ireo tafiditra ao amin'ny publication dia nantsoina «Avadiho ho lasa Operating System mety ho an'ny Digital Mining ny GNU / Linux anao».
Hampidina ny Fampiharana Desktop Binance afaka mitsidika ny Fizarana fampidinana avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny "Binance" na izany mivantana eo amin'ny Fizarana fampidinana avy amin'ny tranonkala ofisialy ao amin'ny GitHub an'ny "Binance".
Efa alaina ny fonosana. "deb" (ho an'ny tranga azo ampiharina) azontsika atao ny mametraka azy amin'ny alàlan'ny baiko "Dpkg" o "Apt" toy izao manaraka izao:
Raha vao apetraka dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny Menu ho an'ny fampiharana an'ny azy GNU / Linux ambanin'ny anarana "Binance".
Farany, raha te hanohy hiditra ao amin'ny Fanapahana DeFi amin'ny tranokalanay «FromLinux », mamporisika anao izahay hijery ireo lahatsoratra teo aloha ireo:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Binance», manokana momba ny azy Desktop Application (App Desktop) Multiplatform, izay manolotra a User Interface (UI) afaka miasa tsara amin'ny solosaina, indrindra amin'ny GNU / Linux, amin'ny fomba ahafahana mampiasa ny fitaovana rehetra an'ny fifanakalozana cryptocurrency voalohany eto an-tany tsy misy mpitety tranonkala; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » BINANCE: Ahoana ny fametrahana ny Binance Desktop App amin'ny Linux?